October 2011 ~ ရင်နင့်အောင်ရဲ့ ဘလော့ခ်
ကျွန်တော်နှင့် အရှိတရားမဲ့ သုည ...
သွားတိုက်ဆေးများဖြင့် လောကသည် လူတစ်ချို့ကို တိုက်ချွတ်ဆေးကြောဟန်ပြုပါသည်။ လူတို့ကလည်း သန့်ရှင်းသွားဟန်ဆောင်လိုက်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ မနက်ခင်းများသည် မိုးချုပ်သွားခဲ့ပါသည်။
ညနေဆည်းဆာတစ်ခု၊ တိမ်တိုက်အချို့၊ နွေဦးရာသီ၊ ညောင်ပင်အိုနှင့် ကျွန်တော့်ကို တွေ့လျှင် သင်သည် စွန်လွှတ်နေသော လူတစ်ယောက်ဟု ထင်ကောင်းထင်နေပေလိမ့်မည်။
ဒီခေတ်ကြီးမှာဘာညာ။ တော်ပါတော့ဗျာ။ ဟုတ်ပါပြီ။ ခုခင်များစားနေတာတဲ့ ကင်ချီကကော ကလပ်စစ်ကြီးဟုတ်လို့လား။ ကဲ။ ထ။ ငါတို့ လုပ်ရှားကြမယ်။ မှောင်နေပေမယ့် ငါတို့မှာဖယောင်းတိုင်တွေ ရှိတယ်။ တို့တွေ လောကကို မီးထွန်းကြည့်ရအောင်လား။
11:06 AM ရင်နင်အောင် No comments
သူငယ်တန်း ဦးနှောက်နဲ့ ဘ၀ ခေါက်ရိုးရာဖြေဖို့
အမူးလွန်နေတဲ့ မျက်မှန်ကို တပ်ဆင်ကာရှာဖွေဦး….။
တစ်ခါသုံး စိတ်ဓါတ်နဲ့ စေတနာထားကြပုံများ
နေအ၀င်မှာ ကမ္ဘာက မှောင်ပေးလိုက်ပြီ။
11:24 AM ရင်နင်အောင် No comments
မြန်မာ။ ကျွန်တော် ခုတလောတွေးနေတာလေးပါ။ မြန်မာ။
မြောက်ဘက်အစွန်းမှာ ကချင်ပြည်နယ်တဲ့။ ကချင်တောင်တန်းကြီးတွေမှာ ရေခဲတောင်တွေရှိတယ်။ ရေခဲတောင်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိတာမဟုတ်။ တောကြီးတွေ။ တောင်ကြီးတွေ။ စိမ်းလန်းတဲ့ ရေ၊မြေသဘာဝတွေနဲ့။ အော်… ဒါဟာ ငါတို့ မြန်မာ။
အနောက်ဘက်မှာ ချင်းပြည်နယ်။ တောတောင်ရေမြေ အေးချမ်းတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခု။ သဘာဝတရားကို စားသုံးနေကြတဲ့ လူမျိုးတွေရယ်လို့ တင်စားလိုက်ချင်။ အော် .. ဒါလည်း ငါတို့ မြန်မာ။
အရှေ့ကို ကြည့်ပြန်လေတော့ ရှမ်းရိုးမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိုးစည်သံတွေကြား အင်းလေးကိုတောင် ကျွန်တော်လွမ်းရပြန်ရောလေ။ ရှမ်းထမင်းချဉ်နဲ့ ရှမ်းတို့ဟူးနွေးနွေးကိုစားလို့ ရှမ်းဈေးညရဲ့ မှိုင်းပြပြကောင်းကင်မှာ ငယ်ငယ်က အဖေနဲ့ ရှမ်းပြည်ကို လိုက်သွားဖူးတဲ့ အတိတ်တွေက ခုတော့ ခပ်ဝါးဝါး။ အော် .. ဒါလည်း ငါတို့မြန်မာ။
တောင်ဘက်အစွန်းက တို့နိုင်ငံရဲ့ အမြီးဖျားလေးမှာကော။ မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ ကော့သောင်း။ ပင်လယ်ရေတွေ ၀ိုင်းထားတဲ့ ကျွန်းလေးတွေ။ ပွင့်လင်းဖြူစင်တဲ့ စရိုက်တွေနဲ့ မလုပ်ဘူးကို မလုပ်ပြီလို့ ပြောကြတဲ့ မြိတ်သူ မြိတ်သားများ။ အော် .. ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဒါလည်းငါတို့ မြန်မာ။
သယံဇာတ ပေါတဲ့မြေ။ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်သံ၊ ပတ္တမြား အစုံထွက်တဲ့ မြေ။ ဒါတင်လား။ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ ခဲမဖြူ တွင်းထွက်ပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့။ တူးချင်သလိုတူး ရေမရှားလေဘူး။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဦးမလား။ စပါး၊ ပြောင်း၊ သီးနှံ၊ ၀ါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ ရာဘာပင်က အစ ကျွန်းပင်ကြီးတွေထိ ကြိုက်တာစိုက်၊ အကုန်ရတယ်။ အဲဒါ မြန်မာ။
မေခ၊ မလိခက ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့ မြစ်တစ်စင်း။ ဧရာဝတီတဲ့။ နိုင်ငံရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံခွဲလောက် ရှည်လျားလေတဲ့ မြစ်။ နိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဘက်အစွန်းကစ၊ ဧရာဝတီတိုင်းအထိ သူက စီးဆင်းခဲ့တယ်။ အဲလို ရှည်လျားတဲ့ မြစ်မျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကစ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ ဆုံးတဲ့ မြစ်မျိုး၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ မရှိနိုင်ဘူး။ ဧရာဝတီ။ ဒါလည်း ငါတို့ မြန်မာ။
လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ၊ ဖုန်ထူ နေပူကြီးထဲမှာပဲ ရင်ကို အေးခြမ်းစေတဲ့ မြင်ကွင်းက ဆန်းကြယ်နေပေါ့။ အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် တောတောင် တွေဝိုင်းရံကားပေးထားတဲ့ အလယ်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာရဲ့ အထင်ကရနေရာတစ်ခု။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားရာ နေရာ။ ပုဂံတဲ့။ အင်း..ဒါလည်း ငါတို့မြန်မာပေါ့။
မြန်မာ။ သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက် သူဖြတ်ကျော်လာခဲ့တယ်။ သက်ဦးစံပိုင်ကနေ ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီအထိ။ သူက စိမ်းလန်းပေးထားတယ်။ အေးခြမ်းပေးထားတယ်။ နွေးထွေးပေးထားတယ်။ မြင့်တဲ့ နေရာ မြင့်၊ နှိမ့်တဲ့ နေရာ နှိမ့်၊ ရေမြေသဘာဝနဲ့၊ သယံဇာတနဲ့။ ငါတို့ နေလာတယ် မြန်မာမှာ။ အော်။ မြန်မာ။
အင်္ဂလိပ်က သိမ်းဖူးတယ်။ ဂျပန်က သိမ်းဖူးတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကို တိုက်ပွဲတိုက် ပြန်လည်ရယူခဲ့ကြတယ်။ ဗုံးကျဲခံ၊ သေနတ်မှန်၊ ငလျင်လုပ်၊ မုန်တိုင်းတိုက်၊ ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ သူဟာ ပြန်လည် ရုန်းကန်နိုးထ ရှင်သန်ခဲ့တယ်။ ခုထိ။ လောဘကြောင့် ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲများ၊ အမုန်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲများ၊ သဘောထားချင်း ကွဲပြားခဲ့ကြတဲ့ တိုက်ပွဲများ၊ ဘယ်လောက်တောင်များခဲ့ ပြီလဲ။ မြန်မာမှာ။
ငွေနဲ့ ၀ယ်ယူလို့ မရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး။ အတုအယောင်လုပ်ယူလို့ မရတဲ့ လွတ်လပ်ရေး။ အုပ်ချုပ်သူ အုပ်ချုပ်၊ စီမံသူ စီမံကြ။ နောက်လိုက်သူ လိုက်။ ငြင်းဆန်သူ ငြင်းဆန်ကြဦး။ မြန်မာ။ ခုထိ လွတ်လပ်ဖို့ ကြိုးစားသူ ကြိုးစားကြတုန်း။ အရှေ့တောင် အာရှမှာတောင် အရာရာ သူနောက်ဆုံးက ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ တီထွင်သူလည်း မရှိ။ ဖန်တီးသူလည်း မရှိ။ ဘ၀ကို ဖြစ်သလိုနေမယ့်လူတွေသာ ပေါ။ တစ်နေ့တာ စားသောက်ဖို့တောင် မလွယ်ကြတဲ့ ဘ၀တွေ။ လမ်းဘေးက ကိုယ်လက်အင်္ဂါမဲ့ တောင်းစားနေသူများ။ အမိမဲ့ အဘမဲ့ သားသမီးတွေ။ မွေးပြီး စွန့်ပစ်ခဲ့ကြတဲ့ မိဘတွေ။ အစွန့်ပစ်ခံ သားသမီးများ။ လမ်းဘေးမှာ သေသူသေ၊ အိပ်သူအိပ်။ ပိုင်ရှင်မဲ့ စိတ္တဇဝေဒနာရှင်တွေ။ ဟာ။ အဲလို ဘ၀တွေ မြန်မာမှာ အများကြီးရှိနေတယ်လေ။
ပြင်ဦးလွင်မြို့လို အေးချမ်းတဲ့ မြို့လေးရှိသလို ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးပြကြီးလည်း ရှိလေတဲ့ မြန်မာ။ တူးပို့ တူးပို့ သင်္ကြန်ပွဲကနေ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်ပွဲ၊ ၀ါဆိုပွဲ၊ ဘုရားပွဲထိ ပွဲလန်းသဘင်ပေါလေတဲ့ မြန်မာ။ ဗမာ၊ တရုတ်၊ ကုလား၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နေကြလေတဲ့ မြန်မာ။ နုံအခြင်းနဲ့ ရိုးသားခြင်းကို သိပ်မကွဲပြားကြတဲ့ မြန်မာ။ ပွင့်လင်းဖြူစင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေတော့ ရှိပါရဲ့။ ဟန်ဆောင်ခြင်းတွေနဲ့ မြို့ပြတွေက ဘာတွေကို ဝေမျှကြမလို့လဲ။ မြန်မာ။
ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးက အစပြုခဲ့တဲ့ မြန်မာ။ ကိုလိုနီ ပညာရေး၊ ပြည်တော်သာ ပညာရေး၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ် ပညာရေး၊ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် ပညာရေး၊ ကမ္ဘာအဆင့်မှီ ပညာရေးရယ်လို့ တို့တွေ သင်ကြားခဲ့ကြ။ စာသင်ကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံနဲ့ ငါတို့မြန်မာ။ ခုချိန်ထိတော့ ပညာတတ်တွေ ပညာသိတွေ ရှားပါးနေကြသေး။ ပညာမဲ့တွေ၊ အတန်းပညာမတတ်နိုင်ကြတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ။ လူကြီးတွေနဲ့။ အော်.. မြန်မာ။
မြန်မာ။ ခံစားသူ ခံစား။ ဆုံးဖြတ်သူ ဆုံးဖြတ်။ ဆန့်ကျင်သူ ဆန့်ကျင်။ ဆန္ဒပြသူ ပြကြဦး။ စနစ်သစ်တွေ ဟောင်းသွားကာ နောက်ထပ် စနစ်သစ်တွေ ရေးကြဦး။ နည်းပညာတွေ၊ ငွေကြေးတွေ၊ လူနေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းတွေ။ လိုက်ကြဦး။ အမှီလိုက်ကြဦး။ ခေါင်းပုံဖြတ်သူဖြတ်။ အားပေးသူ အားပေး။ ကူညီသူ ကူညီ။ အဂတိလိုက်စားသူ လိုက်စား။ ထိန်းသူ ထိန်း။ လွတ်သူ လွတ်။
မြန်မာ။ စတုရန်း မိုင်ပေါင်း နှစ်သိန်းခြောက်သောင်း တစ်ထောင့်ကိုးရာ ခုနှစ်ဆယ် အကျယ်အ၀န်းပေါ်မှာ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ခြောက်ဆယ်လောက် နေကြတဲ့ နိုင်ငံ။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ဆယ့်ငါးခုမှာ လူမျိုးပေါင်း တစ်ရာကျော်နေကြတဲ့ နိုင်ငံ။
သမိုင်းတွေ ရေးကြဦး။ တစ်ခါ သမိုင်းတွေ ပြန်ဖတ်ကြဦး။ မြန်မာ။ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ကြဦး။ ရန်တွေဖြစ်ကြဦး။ ရိုးရာအမွေအနှစ်တွေ၊ သမိုင်းဝင် ကျောက်စာတွေ။ မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကကွက်တွေ။ ဆောင်းတီးသံ၊ ဗုံသံ၊ တယောသံ၊ မယ်ဒလင်သံတွေနဲ့။ မြန်မာ။ ခေတ်ကို မမှီပေမယ့် ခေတ်ကို ကျော်သူ ကျော်ကြ။ ရောက်လာသူ၊ ကျောခိုင်းသွားသူ။ ပေါင်းစည်းသူ၊ လမ်းခွဲသူတွေနဲ့။ ရိုးသားသူ ရိုးသားကြဦး။ ကလိမ်ကကျစ်ကျသူ ကျဦး။ ပြောင်းလဲရေး၊ ပြောင်းလဲရေးလို့ အော်ဟစ်နေကြတုန်း။ ခေတ်စနစ်အသစ်တွေနဲ့ ရုန်းထလှုပ်ရှားကြဦး။ မြန်မာ။
မြန်မာ။ မပြီးသေးတဲ့ ပန်းချီးကားကို ဆက်ရေးကြဦး။ တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးအောင် ရေးကြဦး။ သဘောထားတွေ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲကြဦး။ ဖြူဖတ်ဖတ် အတိတ်၊ အညိုရောင် ပစ္စုပါန်ကနေ၊ အရောင်စုံ အနာဂတ်တွေဆီသို့ ဦးတည်လျက် …………… ။
Posted in: အက်ဆေး,ဆောင်းပါး
လောကကြီးတွင် ဆောင်းရာသီဟုခေါ်သော ရာသီဥတုတစ်ခုရှိပါသည်
1:26 PM ရင်နင်အောင် No comments
နှေးကွေးသော လှုပ်ရှားမှုဖြင့် တိမ်တစ်အုပ် အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ဆီသို့ရွေ့ လျားနေကြသည်..။ တိမ်တိုက်များကို တိမ်တိုက် များဟုသာ မြင်ပေးကြပါ..။ သင်္ကေတများ .. ကိုယ်စားပြုမှုများ အလျဉ်းမရှိသော တိမ်တိုက်များ အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ဆီသို့ရွေ့ လျားနေကြသည်..။ အချိန်ကာလသည် ညနေ နေ၀င်ရီတရော အချိန်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်လိုက်လျှင် ထိုတိမ်တိုက်များတွင် လှပသော ရောင်စဉ်များဖြင့် ထွန်းလင်းတောက်ပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အားလုံး သိပါလိမ့်မည်..။ သို့ သော် အထက်ပါ တိမ်တိုက်များသည် အဖြူရောင် များ လှပစွာ စွန်းပေနေသော တိမ်တိုက်များသာ ဖြစ်ပါသည်..။ သင်၏ မျှောင်လင့်ချက်များ ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျသွားပါသလား..။ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါနှင့် ..။ သင့်စိတ်ကူးထဲက တိမ်တိုက်များဟုသာ သင် ထင်မှတ်ပါက လွတ်လပ်စွာ ထင်မှတ်နိုင်ပါသည်..။ သင်သည် လွတ်လပ်သော လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့လျှင်ပေါ့..။
ရာသီဥတု၏အမည်အား မေးစမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ ဆောင်းဥတု ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်..။ သင်၏ စိတ်ကူးထဲတွင် မြူနှင်းများ ဝေစေချင်လျှင် စိတ်ကြိုက် ဝေနိုင်ပါသည်..။ ယခုအချိန်မှစပြီး သင်၏စိတ်ကူးများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်စေပါ..။
ဆောင်းဥတု၏ နေ၀င်ရီတရောအချိန်တွင် တိမ်တိုက်တစ်အုပ် အနောက်ဘက်ကောင်းကင်သို့ရွေ့ လျားလျက်ရှိသည်..။ ဖမ်းဆုပ်မရသော အရာများ ဖမ်းဆုပ်မယ့်သူ ကင်းမဲ့စွာ ရှင်သန် ခရီးနှင်နေကြသည်..။
စိုးရိမ်သောကများဖြင့် နေ့ စဉ် ရှင်သန်မှုများ ချောင်ဆိုးချွဲကျပ် နှာစေး ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ နှစ်ရှည်ကြာခဲ့ပြီ..။ ရှင်သန်မှု သမိုင်းကြောင်း များဖြင့် ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတရားများ ၀င်ချည်ထွက်ချည် ယက်ဖောက်လှုပ်ရှားနေကြသည်..။ လူသားတစ်ယောက်၏ သက်တမ်းသည် မည်မျှအထိ လျော့ကျနေပြီလဲ..။ မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပါဟု မတိုက်တွန်းလိုပါ..။ ဤအရာသည် စာမေးပွဲ မေးခွန်းတစ်ခု မဟုတ်..။ လွတ်လပ်မှုများ အားသွန်းခွန်စိုက်မွေးဖွားနေသော ရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်.။
သူ ကော်ဖီကြိုက်သည်..။ ငါ ကော်ဖီမကြိုက်.။ ယောကျာင်္း အရက်ကြိုက်သည်..။ မိန်းမ အရက်မကြိုက်..။ မတူညီမှု အလိုဆန္ဒများ အား ကျေးဇူးပြုပြီး အတင်းဆွဲညှိ အဖြေမရှာကြပါနှင့်..။ စစ်ပွဲများ၏ အစသည် မတူညီမှုများကို တူညီအောင် ကြိုးပမ်းရာမှ အစတည်ကြောင်း ... လေ့လာသူများ သိနိုင်ပါသည်..။ ငတ်မွတ်ခြင်းများ အလျှံတညီးညီး တောက်လောင်နေကြောင်း အရပ်ဒေသ တစ်ခုမှ သတင်းတစ်ရပ်အဖြစ် လွင့်ပျံလာသည်..။ ကရုဏာပွားသူ ပွားကြသည်..။ မကြားချင်ယောင်ဆောင်သူ ဆောင်ကြသည်..။ အာမေဋိတ်ပြုပြီး သိရှိကြောင်းသက်သေပြသူ ပြကြသည်..။ ကူညီတတ်သူများ ကူညီဖို့ ကြိုးစားကြသည်..။ နွေရက်များ စောလျင်စွာေ၇ာက်ရှိလာလိမ့်မည်..။ ပြင်ဆင်သင့်သည်များ ပြင်ဆင်ကြပါစို့ ။
မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ တိုက်တွန်းမှုမှ မပါဘဲ အနုပညာတစ်ရပ် သက်တန့်ပေါ်သလို ပေါ်လာခဲ့သည်။ အနုပညာ သည် မည်သို့ သော အရာဖြစ်ကြောင်း မေးသူများ မေးကြသည်။ မသိသလို နေသူများနေကြသည်..။ အပြစ်တင်ခြင်းသည် အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာသူများ အတွက် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသော ဖျော်ဖြေရေးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်..။ မိမိ၏လမ်းကို မိမိ၏ခြေထောက်ဖြင့်သာ လျှောက်လှမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကလေးကအစ ခွေးအဆုံးသိကြပါသည်..။ သို့သော် ထို့ သို့ မသိသော လူကြီးများရှိကြောင်း ပြောလျှင် ယုံကြည်ပါ..။ အမှန်တရားသည် အိပ်မက်ထဲမှ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ ထွန်းလင်းတောင်ပသော နတ်သားလေး မဟုတ်..။
ပြောသင့်သည်များကို ပြောပြီးသောအခါ ... ပြီးဆုံးသင့်သည်များကို အဆုံးသတ်ပြီးစီးပြီးသောအခါ ... အစ ကိုပြန်ကောက်ကြသည်မှာ လူသားတို့ ၏ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ဘဲဥအစရှာလိုသော ရောဂါဆိုးဖြစ်ပါသည်။ သို့ ဖြစ်သောကြောင့် .. အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ဆီသို့နေ၀င်ရီတရော အချိန်တွင် အဖြူရောင် တိမ်တိုက်တစ်အုပ် နှေးကွေးစွာ ရွေ့ လျားနေသည်မှာ အခုထိ မပြီးဆုံးသေးပါ..။ ထိုကောင်းကင်အောက်တွင် မြို့ လေးတစ်မြို့ ၏ နိုင်ငံတစ်ခု၏ ဒုတိယ အရှည်ဆုံးဟု သတ်မှတ်ထားသော တံတားတစ်စင်း ရှိပါသည်..။ တံတားတစ်စင်းရှိသောကြောင့်မြစ်တစ်စင်းလည်းရှိပါသည်..။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် မြစ်တစ်စင်းရှိသောကြောင့် တံတားတစ်စင်းရှိပါသည်..။ မြစ်လယ်တွင် သဲသောင်များ ပေါ်ထွန်းနေသည်..။ မြစ်ကမ်းတွင် အညစ်အကြေး ဆေးကြောနေသူများ တပျော်တပါး ခုန်ပေါက် ဆေးကြောနေကြသည်..။ ထိုမြစ်၏ ကမ်းကပ်လမ်းပေါ်တွင် ညနေခင်း နှင့်ပတ်သက်သော ..ဥပမာ - အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်သူများ၊ ထိုသူများ အစာပြေစားသောက်ဖို့အစားအသောက်ဆိုင်လေးများ..၊ ဖိုမ စုံတွဲများ ထိုင်ခုံကိုယ်စီတွင် ထိုင်လျက်..အစ ရှိသဖြင်..အရာများ ငြိမ့်ညောင်းစွာ တည်ရှိနေသည်..။ ချစ်သောမျက်စိတွင် ထင်ဟပ်သော ပုံ၇ိပ်မှန်သမျှသည် ချစ်စရာကောင်းကြောင်း လောကဓံအချို့ခံစားဖူးသူတိုင်းသိကြပါလိမ့်မည်..။
ဤသို့ ဖြင့် ဆောင်းသည် ဆောင်းသက်သက် တစ်ကိုယ်တည်းရှိမနေဘဲ သက်ဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းများဖြင့်သာယာဝပြောလျက်ရှိပါသည်..။
Posted in: စိတ်ကြိုက် အက်ဆေး,မိုးအိမ်လူ
အညံ့စား ပင်လယ်တစ်ခုမှာ လက်ပစ်ကူးမယ့်ကောင်
ဘာကြောင့်များ ငါကူးနေတဲ့ ရေပြင်တွေ ပြောင်းလဲပေးရမလဲ
အင်း…………. မင်းကလှတော့ အလှသား။
ငါတို့ အပြုံးတွေ ဆူပွက်ခဲ့ပြန်
ငါလိုတာ မင်းပေးရယ်လို့ အပေးယူလုပ်
(ဟာ .. မဖြစ်သေးဘူး)
၁၀ ပေပတ်လည် အိမ်ခန်းမှာ
မင်းလို လိပ်ပြာမလေး သုံးကောင်
4:04 PM ရင်နင်အောင် No comments
ငါ မည်းနေခဲ့တာပါ ။
အိပ်ယာတွေ မကုန်ကြဘူး ။
အတောင်ပံနဲ့ အလင်းတွေက ရီးလေးခို ...
ငါဟာ အစိမ်းလိုက် ငိုကြွေး
အလိပ်လိုက် ထွေးထုတ်ပစ်စမ်း ...။
3:39 PM ရင်နင်အောင် No comments
ငှက်က ခရီးကိုတွေ့တော့ ပျံတယ်
ကားက ခရီးကိုတွေ့တော့ မောင်းနှင်တယ်ပေါ့
ငါးက ခရီးကိုတွေ့တော့ ကူးခတ်တယ်
ကဗျာဆရာက ခရီးကိုတွေ့တော့ လွယ်အိတ်ဆွဲကိုင်တယ်
ဒုံးပျံက ခရီးကိုတွေ့တော့ ကမ္ဘာပတ်တယ်
လူက ခရီးကိုတွေ့တော့ သက်ပြင်းချတယ်လို့
ကိုယ်က အတွဲလုံးလေးတွေ ကစားကြည့်လိုက်တာ
ငှက်က ကားနဲ့ ခရီးတွေကို မှောင်းနှင်ချိန်မှာ
ငါးက ဒုံးပျံဖက်လိုက်ပြီး ကူးခတ်မလို့
ကမ္ဘာက အရင်အတိုင်း ပုံမှန်မလည်နိုင်တော့
လူက သက်ပြင်းကို ခရီးအရှည်ကြီးလို ချရပြီကွယ်
ကဗျာဆရာက ဘယ်သူမှ မသိအောင် လွယ်အိတ်ထဲမှာ ပုန်းနေလိုက်ရော တဲ့ ...။
သြော် .. မိုးတောင် ချုပ်ပါပကော
ကိုယ် ဆန်းသစ်လိုက်တာ ကောင်းပါရဲ့လား ပြန်မတွေးတော့ဘဲ
ဟိုး ရှေ့မှာ ကိုယ်ကို စောင့်နေတာ ခရီးရှည်ကြီးပါလား ...
ခရီးအရှည်ကြီး (၀ါ) အိမ်အပြန်ခရီးကို ကိုယ်တွေ့လေပြီကော ...
သြော် .. တကယ်တော့
ကိုယ်ဟာ တူတူပုန်းတမ်းကစားနေတဲ့ လူရယ်
ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ လိုက်မရှာကြပါလား
ကိုယ့်ကို တွေ့အောင်ရှာပါရော့လား ..
ကိုယ်က ကမ္ဘာကိုသိအောင် အတိအလင်း မကြေငြာချင်ဘူး
ဟဲ့ ... သြော် .... ကဲ ... မှောင်တောင် မှောင်ပါသကော
ဒါဟာ တစ်ခုသော ညနေက ကိုယ်တွေးမိတာလေးပေါ့ကွယ် ..။
3:35 PM ရင်နင်အောင် No comments
ကွန်ယက်နဲ့ ထွန်ခြစ် မွေးမြူခဲ့သမျှ
သီးပွင့်လာတာ အိပ်မက်အပိုဒ် ၂၈ရဲ့
အရေခွံကြီးတစ်ခု ဆိုပါလား ….
ဒီတစ်ခါလည်း ခွဲကြရဦးမယ် သမီးရေ …
မတော်တဆ ခြေခွင်လဲကျသွားတဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရားမှာ
ရေမွှေးနဲ့ သင်းနေတဲ့ အစွန်းအထင်းတချို့နဲ့
ကဲ .. ကြားရတဲ့ သတင်းက လုံးဝမမြင်ရဘူး။
ခုဆို မြေကြီးကို ခဏတိုင်း မော့ကြည့်နေရပေမယ့်
ဘ၀က ပင်လယ်နံ့သင်းတဲ့ နာဂစ်တစ်ခုလို
ဖြစ်ချင်တာတွေလည်း မုန့်လုံး စက္ကူကပ်လို့
အသေးအဖွဲမာနတစ်ခုကြောင့် အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရ
ဒါသည်ပဲ ဒီကောင်က မသိဘူးလို့ ခေါင်းမာခဲ့တဲ့ကောင်
တောင်ပေါ်မှာ လာပေါက်နေတဲ့ မြစ်တစ်စင်း
မြစ်အောက်မှာ လာပွင့်နေတဲ့ တောင်
တောင်ခြေမှာ ငါ အတုံးအရုံး ကျရှုံးခဲ့ပါရဲ့
ကဲ .. ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်စမ်း
ကမ္ဘာတောင် အရင်လို နှစ်ဆယ့်သုံး နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း အတိအကျ မလည်တော့ဘူး
နေကို ပတ်နေတာတောင် ဂြိုလ်ရာမသွင်းခံရတဲ့ ပလူတိုဂြိုလ်တဲ့
ငါက သူများတကာ အိပ်ပျော်ဖို့ ဆိုတေးချော့ရတဲ့ကောင်
နာကျည်းဖို့တောင် အချိန်ကမရှိခဲ့ အင်အားက မရှိခဲ့လေတော့
လမင်းကလည်း ဒီရေတက်အောင် မလုပ်တော့ဘူး
အင်း ……………. သူလည်း .. ငြိမ်သက်လို့။
9:43 AM ရင်နင်အောင် No comments
နေရောင် လရောင်တွေ ဝေးကွာတဲ့ အရပ်မှာ အိပ်မက်တို့ လူးလွန့်နေပြီ..။ နေ့ စွဲများ အဝေးသို့ထွက်သွားပါ..။ ပုံရိပ်များနှင့် ခြောက်လှန့်တတ်သော ကဝေ ပျိုတို့အားလည်း အလိုမရှိပါ..။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းတွင် အခြား မည်သည့်အရာများ ပါဝင်ခဲ့သည်ဆိုတာကို မသိခြင်းသည် ရိုးသားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်..။ အချိန်တန်သည် ဆိုသော စကားကို သိပ်နားမလည်လှပါ..။ အချိန်သည် မည်သို့ တန်သွားသနည်း..။ ဘယ်လို တန်သွားသနည်း..။ တန်သည် ဆိုတာကကော ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ..။
ကျွန်တော့်အတွက် နေခြည်နွေးတစ်ခွက်သာ စွန့်ကြဲတော်မူပါ..။
ပုံပြင်ထဲက သူရဲကောင်းလေးသည် ကျွန်တော်မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြဖို့ လိုမည် မထင်ပါ...။ အားလုံးဇာတ်လိုက် ဟူသော ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ် ရှိပါသည်..။ အားလုံး ဇာတ်ပို့ဟူသော နာကျင်စရာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတစ်ကားရှိပါသည်..။ အားလုံး ဗီလိန် ဟူသော ထိတ်လန့်ဖွယ် အိပ်မက်များ ရှိပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်း မြင်ပြင်တွင် အနာတရ ငှက်ငယ်တို့နာကျည်းစွာပျံသန်းနေကြသည်..။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် အရာအားလုံးသည် ပြီးဆုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်..။
ကျွန်တော့်အတွက် သစ္စာ ဟူသော စကားလုံးမပါသည့် အမှန်တရား တစ်ခု ကို ပြောကြားပေးပါ..။
ဝေးခဲ့ပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့သော အရာများ လက်ဖ၀ါးထဲ ဆုပ်ကိုင်မိချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့ ၏ စိတ်သည် အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါသလား.။
မေးခွန်းမဟုတ်သော နှုတ်ဆက်စကားသက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်.။ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း မဖြစ်ကြပါနှင့် .။ မေးခွန်းများ၏ ခြောက်လှန့် မှုကို အသားမကျနိုင်သော လူသားများသည် အစဉ်အမြဲ ကျောင်းသား လေးတွေသာ ဖြစ်နေပါမည် .။ မှားယွင်းရာ မှားယွင်းကြောင်း ရေးခြစ်ခဲ့သော ရေပေါ်မှ အရုပ်များ၏ အရိုင်းဆန်မှုကြောင့် တောင်စဉ်ခုနှစ်ထပ်တွင် မုန်တိုင်းတစ်ခု ကျရောက်သွားကြောင်း..။ အိပ်မက်များ၏ အမြင်ပျံ ဥာဉ်ဆိုးများကြောင့် ညများ နာမည်ပျက်ခဲ့ရကြောင်း..။ တစ်စုံတစ်ရာသည် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြ ဖို့စကြာဝဠာသို့အလည်အပတ်ခရီး ထွက်ခဲ့သည်..။
ကျွန်တော့်အတွက် ပုံပြင်မဟုတ်သော ပုံပြင်တစ်ပုဒ် ဝေမျှတော်မူပါ..။ အိပ်စက်ခြင်းသည် နှိုးထခြင်းမှာ အဆုံးသတ်ကြောင်း ကျွန်တော် မယုံကြည်ပါ..။
စိတ်စေတသိတ်တို့ ၏ သံမဏိဆန်မှုများကြောင့် ၀င်လေထွက်လေများ ဟစ်ဟော့တီလုံးများလို ၀ုန်းဆန်နေခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်သည်..။ ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းသည် ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော အတ္တတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ပြောလျှင် လက်ခံပေးပါ..။ နောက်ဆုံးအချိန် ဟူသော အဆုံးသတ်တစ်ခုတွင် ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမှ မပိုင်ဆိုင်ရမှန်းသိသော်ငြားလည်း ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကို ရမ္မက်ကြီးစွာ ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းသည် မှားယွင်းမှု တစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူသား အားလုံး လက်ခံကြပြီး ဖြစ်သည်..။ လင်းလက်လိုစိတ်တစ်ခုတည်းနှင့်တော့ ညများကို အသက်တိုစေလိုခြင်းသည် ကလေးဆန်လွန်းသော စိတ်အမူအကျင့်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်..။
ကျွန်တော့်အတွက် စကားလုံးများ မ၀င်ရောက်နိုင်သော တေးချင်းတစ်ပုဒ် တီးခတ်တော်မူပါ..။
ဘောင်များသည် မလိုအပ်ဘဲ ကမျဉ်းကြောထ ရေးဆွဲထားသော အရာများမဟုတ်..။
တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်ခြင်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အားလုံးအသိ ဖြစ်ပါသည်။
နီတိ ကျင့်ဝတ် နှင့် စည်းကမ်းများသည် နှစ်သက်သဘောကျစေရန် ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော ဖျော်ဖြေရေး အရာများမဟုတ်...။ လိုက်နာနိုင်သူများအတွက်သာ မွေးဖွားထားသော နွေဦးရာသီများသာ ဖြစ်ပါသည်...။
Posted in: စိတ်ကြိုက် အက်ဆေး
3:27 PM ရင်နင်အောင် No comments
2:04 PM | Posted by လူဗိုလ်
by Burma Thwe on Wednesday, June 1, 2011 at 6:26pm
ကြိတ်ပြီး ရှိုက်ကာ မျက်ရည်ကျတတ်တဲ့
ခေါင်းရင်းခန်းက သမီးကို ချီထားတဲ့
သမီးလည်း ရောလို့ မျက်ရည်တွေ
ကျခဲ့ရတာ များလှပါပြီ အဖေ……….။
တွေးမိလိုက်တိုင်း အဖေ့ကို တမ်းတနေရတုန်းပါဘဲ…….အဖေရယ်...။
သုံးယောက်ထဲ နဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့
မိသားစုမှာ အဖေမရှိတော့ မပြည့်စုံသလို
အဖေ့ကို အရမ်းတမ်းတ မိတဲ့ အခါ
ဒုက္ခခံစားရတာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်
မထွန်းကားလို့ပါ ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို
မှန်ရှေ့မှာ တသသနဲ့ ဖီးလိမ်းလို့ ခြယ်သနေတယ်…….
မသေချာတဲ့ အတွေးတစ ပေမယ့်
မနေနိူင်လို့ အမေ့လက်ကို ကိုင်စွဲပြီး
ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတာ မေးလိုက်တဲ့ အချိန်
အမေ့ စကားကြောင့် တကိုယ်လုံး
မှန်ပေမယ့် အဲဒီနေ့ ပိုလှသလိုဘဲနော်
ဆိုတော့ အမေက ရီပြတယ်……..။
အဖေ့ အကြောင်းကို တွေးရင်း
အမေ့က အံ့သြစွာ စကားဆိုတာကို
သေချာ နားမလည်ပေမယ့် တခုခုတော့ ခံစားရသလိုပါဘဲ….။
ပြေးဖက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလေးနဲ့
ထွက်ပေါက်ကို စူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ အမေ
သမီးနဲ့ အမေ တိုင်ပင်ထားတယ်
ဒီလိုနဲ့ နေတောင် အတော်စောင်းလို့
အဖေ့ ကို ပြန်လွှတ်ပေးကြပါတော့…………..။
မောင်းနှင်လို့ ကဗျာတပုဒ် အဖြစ်
ရှိတန်ကောင်းပါရဲ့လို့ တိတ်တခိုး ရည်ရွတ်လျှက်………..။
တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်ထွန်းကားစေဖို့ အတွက် သာတူညီမျှ လူ့အခွင့်ရေးတွေကို ပြည်သူတွေ ခံစားနိူင်ဖို့ ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံတော်ကို ထူထောင်ဖို့ ကြိုးစားကြကာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ သူရဲကောင်းများ အားလုံးလွတ်မြောက်အောင် မိတ်ဆွေတို့ တတ်နိူင်သလောက်လေး ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားပေးကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်း နိူးဆော်လိုပါတယ် ခင်ဗျာ ။ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီးသွားရင် မိတ်ဆွေတို့ ရင်ထဲက ခံစားများကို ရင်ဖွင့်ချခဲ့ကြပါလို့ လေးစားစွာ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်....။
Posted in: စိတ်ကြိုက် ကဗျာ
4:54 PM ရင်နင်အောင် No comments
သင်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောပြပါ။
အုတ်ခဲတစ်ခဲမှာ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံသောအုတ်ခဲကို အုတ်ခဲပီသတဲ့ အုတ်ခဲ၊ တနည်းအားဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အုတ်ခဲ ဟု ဆိုနိုင်သည်။ပျဉ်တစ်ချပ်မှာ ရှိသင့်သည့် အရည်အသွေးများနှင့် ပြည့်စုံသော ပျဉ်ချပ်သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော ပျဉ်ချပ်ပင်။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော လူဆိုသည်မှာ တည်ကြည်ခိုင်ခံ့သည့် ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေး တသမတ်တည်း ပေးနိုင်သူသာဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုလေးစားသူမှန်သမျှ ထိပ်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားမည်ဟူသော စိတ်မျိုး ရှိကြသည်။
လူငယ်ဘ၀မှာ အမှား၊ လူလတ်ဘဝမှာ စွန့်စားရုန်းကန်မှု၊ လူအိုဘဝမှာ နောင်တ။
လူငယ်ဘဝတွင် ပြုပြင်စီမံခဲ့ရသမျှ အိုမင်းချိန်အတွက် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးသာ ဖြစ်ရချေသည်။
အသက်(၄၀)အရွယ်သည် လူငယ်တစ်ဦး၏ အိုမင်းချိန်။ အသက်(၅၀)အရွယ်သည် လူအိုတစ်ဦး၏ နုပျိုချိန်ဖြစ်သည်။
လူငယ်တို့၏အားသည် ပျိုရွယ်မှု၊ လူအိုတို့၏အားသည် ရင့်ကျက်မှု။
အချို့သည် ဘဝတွင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ မွေးဖွားလာကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏ ကြီးကျယ်မှုကို မမက်မော မခုံမင်ကြချေ။ တကယ်ဆိုတော့ သူတို့သည် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရာဇဝင်တွင်အောင် လုပ်သွားသူများသာ ဖြစ်ကြသည်။
သင့်မှာ မွေးသည်မှ သေသည်အထိ နေသွားရမည့် တိုတောင်းသော ဘဝလေးတစ်ခု ရှိသည်။ ထိုဘဝသည် အညံ့စား ပန်းချီဆရာ၏ ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို မထင်မရှားလည်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်၏။ ဒါဗင်ချီ၏ မိုနာလီဇာပန်းချီကား၊ ရိုဒင်၏ တွေးတောသူ ပန်းပုရုပ်များကဲ့သို့လည်း ကြီးကျယ်သွားနိုင်ပါ၏။
နပိုလီယန်က မဖြစ်နိုင်ဆိုသားစကား ငါ့အဘိဓာန်တွင်မရှိ ဟု ဆိုခဲ့သည်။ လောက၌ မဖြစ်နိုင်သောအရာတွေလည်း ရှိမှာ မုချဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဟူသော အတွေးမျိုး ခေါင်းထဲ အဝင်မခံသော သူအတွက်မူ မဖြစ်နိုင်ဟူသောအရာတွေသည် အခြားသူများထက်တော့ နည်းပါးနေမည်မှာ သေချာသည်။
လူဦးရေ ၅၄ သန်းရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ D.Sc ဘွဲ့ရ ပညာတတ် တစ်ယောက်မှမရှိသေးဘူး။ လူတွေကျောင်းမနေရ၊ အလုပ်အကိုင်မရကြတော့ သူခိုး သူဝှက်ဖြစ်သူဖြစ်၊ လူဆိုးလူမိုက် ဖြစ်သူဖြစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကို ဒီလိုနဲ့တော့ အပျက်မခံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သွားရမလဲ၊ ဘာလုပ်ရမလဲ၊၊ မဖြစ်မနေသွားမယ်၊ လုပ်ရမယ်၊ ကျနော်တို့ ကြိုးစားရမယ်။
တိုက်ရမည်လား ဆုတ်ရမည်လား မကွဲပြားသည့်အခါတိုင်း ကျွန်ုပ် တိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်မည်။
ပစ်မည်ဆိုလျှင် အဆီကို နှမြောမနေနှင့်၊ စားမည်ဆိုလည်း သဲကြောက်မနေနှင့်။
မနေ့ကငါထက် ဒီနေ့ငါက ပိုသာရမည်။
လူအများစုတို့သည် မိမိတို့မှာရှိသည့် တီထွင်ကြံဆမှုစွမ်းရည်နှင့် အလုပ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တို့၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံမျှကိုသာ အသုံးပြုနေကြသည်။ အကယ်၍ မိမိ စွမ်းအားရှိသမျှသာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ အသုံးချမည်ဆိုက မိမိ၏ စွမ်းဆောင်မှုများအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်ပင် အံ့အားသင့်ရလိမ့်မည်။
အတော်ဆုံး လူများထံ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာများ ရောက်ရှိလာစမြဲဖြစ်သည်။
"အကယ်၍…..ခဲ့လျှင်” ဆိုတာမျိုးမတွေးနှင့်။"အဲ့ဒါသာ ငါမလုပ်ခဲ့မိလျှင်”၊ "ဒီကိစ္စကြီးသာ ငါ့မှာမဖြစ်ခဲ့လျှင်”၊ ”ငါသာ……လို ကံကောင်းခဲ့လျှင်” စသည့် အကျိုးမရှိ၊ အကြောင်းမထူးသည့် အတွေးများဖြင့် အချိန်ကုန်မခံနှင့်။
"ဘယ်လို” လုပ်မလဲဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားပါ။
အိပ်တယ်ဆိုတာ မူးရစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသလိုပဲ၊ များများအိပ်လေ ပိုပြီးအိပ်ချင်လေပဲ။ အိပ်တဲ့အတွက် အချိန်ကုန်တယ်၊ ခွန်အားယုတ်လျော့တယ်၊ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးတယ်။
စာမဖတ်သူ အကန်းနှင့်တူ၊ စာမဖတ်က လူ့ဗာလ။
လူမျိုးတစ်မျိုး၏ အဆင့်အတန်းကို သိလိုလျှင် စာတတ်မတတ်ကိုကြည့်။
စာအုပ်တွေနှင့် ပြည့်နေသောအိမ်သည် ပန်းပေါင်ဝေစာနေသော ဥယျာဉ်ကြီးနှင့် တူသည်။
ပညာရေးဖြင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မရမနေ တည်ဆောက်ရမည်။
စာဖတ်ခြင်းသာလျှင် ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သည်။
မိန်းမဟာ ဆေးလိပ်ထက် ကျုပ်တို့အတွက် သစ္စာရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိန်းမဟာ ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက် မိန်းမပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်ကတော့ နောက်ဆုံးမှာ အန္တရာယ်ဘဝသို့ ပြောင်းသွားတယ်။
ပုခက်လွှဲသောလက်များသည် ကမ္ဘာကို စိုးပိုင်ထားနိုင်၏။
မိန်းမများသည် ယောင်္ကျားတို့ထက် မှတ်ဥာဏ်ကောင်း၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့်သည် နည်းနည်းသိ၍ များများနားလည်သောကြောင့် ဖြစ်၏။
က္ကတ္ထိယ မိန်းမဓာတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရှေ့သို့ တွန်းတင်ပေးနိုင်၏။
ယောင်္ကျားမှာ အတွေး၊ မိန်းမမှာ အမြင်။
လူတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံ ကလေးများနှင့် တူကြသည်။ မည်မျှပညာတက်တက်၊ မည်မျှ အသက်ကြီးကြီး ကလေးအတွေးမျိုး တွေးကြသည်။ ကလေးသည် မိမိလက်က ကစားစရာကို ကောင်းသည်မထင်။ အခြားကလေးလက်က ကစားစရာကိုမှ အကောင်းထင်သည်။ လိုချင်သည်။ မိမိလက်ငင်းရယူနိုင်သော အရာကို အကောင်းမမြင်။ အဆိုးများ၊ အပျက်များ၊ ချွတ်ယွင်းချက်များကိုသာ မြင်ကြ၏။ သူတပါး၏ အနေအထားကို အကောင်းတွေချည်း၊ အနှစ်သာရတွေချည်းဟု မြင်ကြ၏။
တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် မရည်ရွယ်ဘဲ ပြုလုပ်သောအလုပ်သည် လူသားအားလုံးအတွက် မြင့်မြတ်သော အလှူဒါန မျိုးပင်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ရေတွေ ပြည့်နေသော်လည်း သောက်သုံးရန် ရေတစ်ပေါက်က ရှားလွန်းလှသည်။
4:49 PM ရင်နင်အောင် No comments
Posted in: စိတ်ကြိုက် ကဗျာ,အောင်ဝေး
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ရက်ပိုင်းအတွင်းလွတ်နိုင်ဟု ဦးရွှေမန်းပြော
11:17 AM ရင်နင်အောင် No comments
by Jade Land on Sunday, October 9, 2011 at 9:54am
စနေ, 08 အောက်တိုဘာ 2011 VOA
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့ကိစ္စ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း အကောင်အထည် ပေါ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ နော်ဝေ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ Espen Barth Eide နဲ့ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ သူရဦးရွှေမန်းက အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
“မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အကောင်အထည်ဖော်ပါမယ်။ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းပေါ့။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မရှိဘူးလို့ အစိုးရကပြောဆိုပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား နှစ်ထောင်ကျော် အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ရှိနေပြီး သူတို့ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း က တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နော်ဝေနိုင်ငံ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Espen Barth Eide နဲ့အဖွဲ့ဟာ အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်ကနေ ၉ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေပြီး မနေ့က စနေနေ့ကတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၂ နာရီခန့်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကတော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နဲ့ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
နော်ဝေ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Espen Barth Eide ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်ပိုင်း အခြေအနေတွေကို လေ့လာ သုံးသပ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နော်ဝေနိုင်ငံဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကို အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံအားပေးလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
10:39 AM ရင်နင်အောင် No comments
by Save Irrawaddy on Thursday, 06 October 2011 at 18:59
( Yale Global မှ3Oct 2011 ရက်စွဲပါ Bertil Lintner ၏ “ Burma delivers its first rebuff to China” သတင်းကို ဘာသာပြန်သည်)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ပြည်သူတို့ ပွင့်လင်းစွာ ဆန္ဒပြနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ‘ ဧရာဝတီ ကယ်တင်ရေး’ အစည်းအဝေးများကိုမူ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာများကလည်း နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ မြန်မာသံရုံးများ၏ အပြင်ဖက်တွင် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်များ ကြီးထွားလျက်ရှိရာ၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုကြီးမားသော မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ကချင်ပြည်နယ်မှ ရရှိသော သတင်းများအရ ကေအိုင်အေနှင့် အစိုးရတပ်များအကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်အတွင်း အလုပ်လုပ်နေသော တရုတ်လူမျိုး အလုပ်သမားများနှင့် ကုန်သည်များ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်ထွက်ပြေးသွားကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
ဤစကားစုတွင် အတင်းအကြပ် ဆိုသည်မှာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အစိုးရဖက်က အမြင်ကို ကြည့်ပါက တရုတ် ခြိမ်းခြောက်မှု ဝှက်ဖဲကို ထုတ်ကစားခြင်းဖြင့် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးကို အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကာ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပြစ်တင် ဝေဖန်မှု လျော့ပါးသွားရန် မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
Posted in: စိတ်ကြိုက် ဆောင်းပါး,သတင်း